Izicathulo ze-Ballet ezenziwe ngesikhumba sangempela
Imfashini Umhlahlandlela wokuthenga
Izicathulo zabesifazane yingxenye ebaluleke kakhulu ekudaleni isithombe esingenakulinganiswa. Izikebhe, ama-moccasins, izicathulo - ngasinye sezinhlobo zezicathulo cishe zikhona kunoma yimuphi intombazane, kodwa nge-100% ithuba lokuthi ungathinta izicathulo ze-ballet zesikhumba sangempela, ezenzelwe ukunikeza imilenze ukukhanya nokududuza.
Izicathulo zesikhumba zebesifazane
Emashalofini wezitolo ungabona amamodeli amaningi ahlukene ayenziwe ngezinto ezihluke ngokuphelele, kodwa okungcono kakhulu namanje zibhekwa njengezicathulo zesikhumba se-ballet. Kungani? Ake sibuke ndawonye.
Amandla . Abesifazane abathile, ngenxa yombono, bathenge izicathulo ngamanani aphansi avela e-leatherette nezinye izinto ezingezona zemvelo, kodwa ukumelana nokugqoka kwezicathulo ezincane kakhulu, ngakho ngezinye izikhathi ngenkathi eyodwa kufanele uthenge ezinye izicathulo. Izicathulo ze-Ballet ezenziwe ngesikhumba sangempela, ngokungangabazeki, zizokhonza umnikazi wayo isikhathi esingaphezu kwesisodwa nangaphezulu konyaka owodwa.
Ukuphefumula . Esinye sezici ezibaluleke kakhulu zesikhumba yikhono lokudlulisa umoya kalula, okuvumela imilenze yabesifazane ukuba iphefumule. Njengoba izicathulo ze-ballet ziyizinhlobo zezicathulo zasehlobo zasentwasahlobo -hlobo, le mfanelo ayiyona nje inzuzo, kodwa kunesidingo.
Induduzo . Ngesikhathi sokwenza izicathulo ezivela esikhwameni semvelo, le nto ingaphansi kwemiphumela ethile, ekugcineni yenza kube lula futhi iguquguquke. Le mfanelo ivumela isithuthuthu ukuthi ivumelane nokuma kwezinyawo. Ngendlela, ngenxa yalokhu, uma uhamba, amaflethi e-ballet ezinyaweni azange azizwe, ngakho-ke abantu bangazwa igama elithandwayo - "ama-slippers".
Ukubukeka . Ungakhohlwa ukuthi izicathulo ezenziwe ngezinto ezibonakalayo zibukeka zihle kakhulu futhi zinhle kakhulu kunezikhumba ezingenalutho. Kuzo zonke izinhlobo zobulili obuhle, kuyisifiso sokuhleleka okuba yisici esikhulu lapho ukhetha izicathulo ze-ballet.
Yini okufanele ugqoke amaflethi ama-ballet esikhumba?
Eqinisweni, inani lezinketho alinamkhawulo, ngoba lolu hlobo lwezinyawo luhlanganisa ngempumelelo cishe noma yisiphi isitayela sezingubo. Ngakho-ke, amaflethi amnyama esikhumba esikhwameni namhlophe amacatshangelwa njengama-classic. Le mibala emibili iyonke, ngakho-ke ungathatha noma yikuphi izingubo. Imfashini enhle phakathi kwentsha iyinhlanganisela yezicathulo ze-ballet ne-short denim shorts noma i-skirt ne-T-shirt. Lokhu kubonakala kulungile ukuhamba nxazonke kwedolobha noma ukuhlangana nabangani eshisayo. I-stylish encane iyinhlanganisela ye-ballet yakudala ene-leggings ne-shirt.
Ukugqoka amakotini kwabesifazane
Ingubo eyodwa yehlombe
Ingubo yokusika mahhala
Ijaji eliqediwe phansi
Izingubo zezimbuzi zasebusika zabesifazane
I-white lily - imbali-mpilisi
I-Sarafans 2017 - ama-novelties ehlobo ehlobo oluzayo
Utamatisi oqoshiwe - Ungadliwa
Ukufakelwa kwezindonga zendlu ngaphasi kwezingcingo
Kungani amakati athaqa?
Ukukhishwa kwezinwele ze-Laser - yonke imininingwane nokuqaphela kwenqubo
Ukukhwabanisa imfashini kwentwasahlobo-ehlobo 2013
Amakhansela ngesitayela se-Provence
Ikhishi ngesitayela saseScandinavia
I-Tendonitis - ukwelashwa
Ukudubula okungama-24 ngesinye isikhathi ngaphambi kwengozi
Izikhwama zemfashini - ehlobo 2015
Isifo se-Catherine Zeta-Jones
I-Gaziki enganeni - indlela yokusiza?
Izikhumba zamanzi ngesikhathi sokukhulelwa
Izimpawu ngosuku lukaPetrov ngoJulayi 12
I-fashionable nail design 2015
I-lacquer ye-Acrylic emanzini
Ungamisa kanjani ukufeza imisebenzi yomunye umuntu?
Ukuphuka Pamela Anderson ukukhangisa izicathulo ze-eco